Dhawunirodha mufananidzo weKurume 21 kiyi yekukoka | IPhone nhau
Dhawunirodha mufananidzo weKurume 21 kiyi kukoka
Nezuro masikati, nguva yeSpanish, Apple yakatanga kutumira midhiya kukoka kwechiitiko chichaitika munaKurume 21. Hatizive zvikonzero nei Apple yatora nguva yakareba kutumira iyi kukoka, sezvo ichiwanzoitumira kana kuchine mazuva gumi nemashanu asara ekupemberera kwayo.
Apple inotarisira zvakanyanya mukugadzirwa kwese kukoka dzezviitiko zvakaitwa mukati megore rose, izvo zvinowanzove zvisina kuwanda. Vazhinji vashandisi vanofarira kutora mifananidzo inoshandiswa mavari kuti vagadzire mimhanzi yavo kana kungoishandisa semberi pane zvavanoshandisa.
Kana iwe uchifarira kurodha pasi mufananidzo unoshandiswa pakadai, panopera chinyorwa ichi unowana chinongedzo chekuchirodha pasi. Mufananidzo ine resolution ye 1920 x 1080, inobata zvishoma isingasviki 200 kb uye inowirirana nechiratidziro cheiyo iPhone, iPad uye iPod Kubata. Tinogona zvakare kushandisa ichi chifananidzo paMac yedu, asi sezvo icho chakagadzirwa chakatwasuka, isu tichafanirwa kucheka kuti chikwane sikirini, saka isu tinorasikirwa nesarudzo kunze kwekunge isu tachinjisa mufananidzo uye kuushandisa pasina trim.
Kuti utore mufananidzo wacho iwe unofanira kungobaya pane thumbnail uye kana wovhura unofanira dzvanya uye ubatise munwe wako pachiratidziro kusvikira iyo Download mufananidzo sarudzo yaonekwa kuti tinoponeswa patiri. Kana tangochengeterwa pane yedu reel, isu tinongofanirwa kuenda kuApplication application, tizviise pamufananidzo uye tinya pazasi rekuruboshwe bhatani kuratidza zviripo sarudzo. Pane zvese izvi sarudzo tinofanirwa kutsvaga Wallpaper uye tione kana isu tichida kuti mufananidzo uve kumashure kwechidzitiro kana zvakare kumashure kweiyo block skrini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Dhawunirodha mufananidzo weKurume 21 kiyi kukoka
Sezvataitarisira, Apple ichatepfenyura chiitiko pane 21st mhenyu
Mabhatiri matsva aigona kupa kuzvimiririra kwevhiki imwe chete